🥇 ▷ Halyeeyga Sinnoh halyeeygu wuxuu ku noqon doonaa Pokémon GO ✅
Halyeeyga Sinnoh halyeeygu wuxuu ku noqon doonaa Pokémon GO
Pokémon GO Waxaa si joogto ah loo cusbooneysiiyaa si loogu daro Pokémon cusub. Meel looga soo dego munaasabadan, iyo in lagu heeso damaashaadka Halloween, waxaa loogu talagalay Renegade Pokémon, oo ah abuur ahaan qaabkiisa iyo awoodahiisa leh noocyada Ghost iyo Dragon. Waxaan ka hadlaynaa halyeeyada Pokémon Giratina.
Iyada oo loo marayo bogga internetka ee loogu talagalay ciyaaraha mobilada, waxaa lagu dhawaaqay in Giratina ay ku laaban doonto Shanta Xiddig ee Weerarka ah. Haddii aad daneynaysid inaad ka soo saarto hal abuurkan cabsida leh ee Distortion World waa inaad maskaxda ku haysaa inay ku jiri doonto annaga oo keliya waqtiga la heli karo, laga bilaabo Isniinta Sebtember 23 (3:00 PM, waqtiga Mexico City) illaa Khamiista 17 Oktoobar isla waqti. Sidoo kale, maalinta Arbacada, Sebtembar 25 waxaa jiri doona kororka fursadaha lagula kulmayo bahalkan halyeeyada ah laga bilaabo 6:00 PM illaa 7:00 PM, waqtiga maxalliga ah. Muuqaal kale oo ka mid ah Weeraradan ayaa ah in Giratina ay ku jiri doonto qaab wax laga badalay.
Seefta & Gaashaanka Pokémon – Waxaa laga heli karaa Amazon
Sidii aan kuu sheegnay, daanyeerkani waa Ghost iyo Dragon, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad qaadato Pokémon Fairy, Dragon ama Dark si aad ula dhaqanto si wax ku ool ah. Sidoo kale, waxaan kugula talineynaa inaad la dagaallanto inta jeer ee aad karto, maxaa yeelay waxaa sidoo kale jiri doona itimaal sare oo ah inaad ka hesho noocyadeeda midab ee kala duwan.
Tered Alced Forme Giratina ayaa dib uga soo kicitimay World Distortion dhawaanna ku soo laaban doontaa weerarada… ???? Miyaad geesi u tahay inaad ka hortagto Legendary Pokémon? Https://t.co/m08uT17XR5 pic.twitter.com/Pvk1KM2xSt
– Pokémon GO (@PokemonGoApp) Sebtember 20, 2019
Sidee ku heshaa warkan? Miyaad jeceshahay inaad qabato Giratina? Ma la kulmi doontaa saaxiibbadaa si aad uga qaybqaadato Hawlgallada? Noosheeg faallooyinka.
Wax ay tahay inaad ogaato haddii aad tahay ciyaaryahan Pokémon GO waa in Mewtwo loo qorsheeyay inuu ka soo muuqdo Weerarada; si kastaba ha noqotee, Niantic ayaa dib u dhigtay kulamadaas. Waxaan aaminsanahay inaad sidoo kale xiiseyneyso in horeyba loo qeexay hal abuurka uu xiddig noqon doono Maalinta Bulshada ee soo socota.
Pokémon GO Waxaa laga heli karaa qalabka macruufka iyo qalabka Android. Waxaad ka heli kartaa warar dheeri ah oo la xidhiidha isaga haddii aad booqato bartilmaameedkayaga yar ee loogu talagalay ciyaaraha mobilada.